Dare remakurukota rakasunga nezuro kuti mutemo wekudzivirira kupararira kweCovid-19, weLevel 4 Lockdown, urambe uripo sezvo huwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCovid-19 huri kuramba huchikwira.
Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, mushure memusangano wemakurukota.
Izvi zviri kuuya panguva iyo South Africa yakanyevenutsa mutemo uyu, kubva pa Level 4 kuenda paLevel 3, ichiti kupararira kwedenda reCovid-19 kwakanga kwadzikira munyika iyi.
Dare iri rinonzi rakapasisawo zvakare chikumbiro cheboka rezvekushanyirwa kwenyika chekuti miganho yenyika yeVictoria Falls neKazungula inge ichivhurirwa vashanyi vakabaiwa nhomba dzose dzekudzivirira Covid-19.
Danho iri rinonzi rakatorwa mushure mekuona kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana (30%) zvevagari vemuVictoria Falls zvakabaiwa nhomba yekudzivirira kubatwa neCovid-19.
Nyanzvi mune zvehutano, vachidzidzisa paNottingham Trent University, Doctor Mathew Nyashanu, vanoti idanho rakanaka rekuti nyika irambe iri paLevel 4 Lockdown, asi vachiti hurumende inofanirwawo kuona kuti ingaita sei kune vanhu vakabaiwa nhomba dzose asi vari kutadza kuita mabasa avo nekuda kwemutemo uyu.
Hurukuro naDr Mathew Nyashanu